EXCEL ကိုအတွက်ကြံစည်မှုအဖြစ် - EXCEL ကို - 2019
Microsoft က Excel ကိုမှကြံစည်
Yandex Browser ကိုအမြန်ဆုံးခေတ်သစ်ကို web browser များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီအစဉ်အမြဲမရှိ, ယနေ့ကြှနျုပျတို့သညျဤအစီအစဉ်၏ရှည်လျားသော startup နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လမ်းကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
Yandex Browser ကို၏ပစ်လွှတ်အရှိန်မြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
အလားတူပြဿနာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ Yandex မှနာမည်ကျော် Web browser ကို၏ပစ်လွှတ်အရှိန်မြှင့်ဖို့အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူအောက်တွင်။
Method ကို 1: နောက်တိုးများကို disable
, အင်တာနက်ကနေဖိုင်တွေကို download လုပ်ပါ, သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျနော်တို့ကြော်ငြာများပိတ်ဆို့ရဲ့ IP-address ကိုပုန်းအောင်းနှင့်သင့် web browser ကိုအခြားအသုံးဝင်သော features တွေများစွာပေးသည်: ဒီနေ့ add-ons တွေကိုဘရောက်ဇာများအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲစိတ်ကူးဖို့ခက်ခဲသည်။ စည်းကမ်း, installed Add-ons တွေကိုအရေအတွက်များတဲ့အဖြစ်နှင့်တစ်ဦးရေရှည်မှာ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကို web browser ကို Start Menu ခလုတ်ကိုရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်အပိုင်းကိုဖွင့ ်. "ထို့အပြင်".
မျက်နှာပြင်အားလုံး add-ons တွေကိုစာရင်းတစ်ခုပြသပါလိမ့်မယ်။ add-ons တွေကိုများ၏ Deactivate နဲ့ဖယ်ရှားရေးလုပ်ဆောင်စေရန်, သင်ရုံတခုလှုပျမရှားအနေအထားဖို့ switch ကိုရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုသာအများဆုံးလိုအပ်သောထွက်ခွာလုံးကိုပိုပြင်ဆင်ချက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့တော့သည်။
သင့် browser ကို restart လုပ်ပါ - အဲဒါကိုနီးစပ်သည်နှင့်နောက်တဖန်စတင်ပါ။
Method ကို 2: ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များလွှတ်ပေးရန်
RAM ကိုနှင့် CPU ကို၏ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကိုအပြေးလျှင်မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးရေရှည်မှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီကနေကျနော်တို့ကစနစ်အပေါ်ဝန်ဖြစ်စဉ်များလျှော့ချရန်လိုအပ်သောကြောင်းကောက်ချက်ချ။
ပထမဦးစွာပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ် "Task Manager ကို"။ ဒါကကီးဘုတ် shortcut ကိုအပေါ်စာရိုက်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် Ctrl + Alt + Esc.
tab ကို "လုပ်ငန်းစဉ်" သင် CPU နဲ့ RAM ကိုအသုံးချ၏ဒီဂရီကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဤအကိန်းဂဏန်းများကို 100% မှအနီးကပ်မှန်လျှင်, သင်အသုံးမပြုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များပိတ်သဖြင့်၎င်းတို့ကိုလျှော့ချဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့, အမလိုချင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "Task ကိုရပ်တန့်"။ ထို့ကြောင့်အပေါငျးတို့သမလိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်များဆီသို့။
ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ "Task Manager ကို"အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး, "Startup စာမျက်နှာ"။ ဤအပိုင်းကိုကွန်ပျူတာစတင်လိုက်တာနဲ့အလိုအလျှောက်စတင်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်။ သင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လှည့်ပြီးနောက်ချက်ချင်းမလိုအပ်ပါဘူးလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအပို applications များကွာ clean, အလျင်အမြန် run ဖို့ Yandex Browser ကို။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "Disable".
Method ကို 3: ဗိုင်းရပ်စ်လှုပ်ရှားမှုဖျက်သိမ်းရေး
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဗိုင်းရပ်စ်ပရိုဂရမ်အားလုံးကို၏ပစ်လွှတ်နှင့်စစ်ဆင်ရေးအလွန်နှေးကွေးစွာထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သော, ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအသုံးပြုတဲ့ browser ၏သငျ့လျြောသောစစ်ဆင်ရေးထိခိုက်စေသဖြင့်, CPU နဲ့ RAM ကိုအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ဝန်ပေးနိုင်ပါသည်နှစ်ဦးစလုံး။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျဗိုင်းရပ်စ်အဘို့အသင့် system စစ်ဆေးသင့်, သင် (မရရှိနိုင်လျှင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်) သင့် antivirus program ကဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲနိုင်ပါလိမ့်မည်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့နှင့်ဥပမာအားဖြင့်, အထူးတင်နိုင် utility ကိုသုံးပြီးဒေါက်တာ Web ကို CureIt ။ ဒါဟာကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စနစ်အားစစ်ဆေးမှုများကိုကြည့်, သူမ၏ဥပမာပေါ်ခဲ့သည်။
Dr.Web CureIt ၏ပစ်လွှတ်ကိုလိုက်နာပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစီမံခနျ့ခှဲသူအခွင့်အရေးကိုလိုအပ်သည်သတိပြုပါ။
သဘောတူညီချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး tick, အဲဒီနောက် button ကို click "Continue".
ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ utility ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိသမျှ drives တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ယင်း utility ကိုရန်၎င်း၏အလုပ်ကိုစတင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါကျေးဇူးပြုပြီး "Start ကိုစကင်".
scanning ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအချိန်, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် switched ရမည်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဘို့ပြင်ဆင်ရမည်ဒါအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်စကင်၏ရလဒ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့လျှင်, tool ကိုကဖယ်ရှားပစ်ရန်သင့်အားပြ, အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ကြိုးစား, ထိုသို့ရလဒ်များကိုဆောင်ကြဉ်းမပါဘူးဆိုရင်, ဗိုင်းရပ်စ် quarantined လိမ့်မည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးလှုပ်ရှားမှု, ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါရန်သေချာစေပါဆက်ရှိနေသေးပြီးတာနဲ့စနစ်နောက်ဆုံးတော့အားလုံးပြောင်းလဲမှုများချမှတ်ခဲ့သေးသည်။
Method ကို 4: စနစ်ဖိုင်တွေ Check
ယခင်နည်းစနစ်များအဘယ်သူအားမျှအလုပ် Yandex Browser ကိုအရှိန်မြှင့်ကူညီမပြုခဲ့လျှင်, ပြဿနာ, အမည်ရကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်မှထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းငှါစနစ်ဖိုင်တွေဟာ operating system ကိုသူ့ဟာသူဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်ကဖိုင်တွေကိုကွန်ပျူတာစစ်ဆေးမှုများကို run နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားပါ။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်မြင့်မားသောအခွင့်ထူးနှင့်အတူ command prompt ကို run ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့က Windows Search bar မှာဖွင့်လှစ်ပြီးရှာဖွေစုံစမ်းမှု mount:
မျက်နှာပြင်ကိုသင် mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်နှိပ်ပြီးရွေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်အပေါ်ရလဒ်ပြပေးလိမ့်မယ် "စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် Run".
terminal ကိုပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တဲ့အခါမှာ, သင်ခလုတ်ကိုအောက်က command ကိုရေးသားခြင်းနှင့်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်စကင်ကို run ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ဝင်ရောက်:
တနည်းကား, စကင်ဖတ်စစ်ဆေး - နှေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်က Windows ဖိုင်တွေအားလုံးကို check လုပ်ပေးပါတယ်စဉ်နာရီပေါင်းများစွာဖို့နာရီဝက်စောင့်ဆိုင်းနှင့်, လိုအပ်ပါက, တွေ့ရတဲ့အမှားဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိသည်ဒါကြောင့်။
Method ကို 5: cache ကိုရှင်းလင်း
တိုင်း browser ကိုသင်သည်သင်၏ hard drive ကိုရန်အင်တာနက်ကနေဒေတာတွေကို progruzhennye ပြီးသားကယ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ cache ကိုအင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာသိသိသာသာကို web စာမျက်နှာများတွင်၏ပြန်လည်တင်အရှိန်မြှင့်နိုင်ပါ။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ cache ကိုအတူပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ဖို့နေရာရှိတယ်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ထို့နောက်ဘရောက်ဇာ (ဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ပါအပါအဝင်) စနစ်တကျအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့အဖြေတစ်ခုပေးနိုင် - Yandex Browser ကိုသင်၌ cache ကိုရှင်းလင်းပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ cache ကို Yandex Browser ကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
Method ကို 6: သင့် browser setting ကို Reset
အထူးသဖြင့်သင်သည်၎င်း၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးချိုးဖောက်စေခြင်းငှါတစ်ခုစမ်းသပ် browser setting ကိုစမ်းသပ်ရန်လျှင်ဖြစ်နိုင်သည်အကြောင်းပြချက်ပေးသည်။
Yandex browser setting ကို reset စေရန်, သင် menu ကို button ကို click နှင့်အပိုင်းကိုသွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် "Settings" ကို.
ပေါ်လာသောစာမျက်နှာ၏အဆုံးမှဆင်းသွားနှင့် button ကို click "Show ကို setting များကို advanced".
အပိုဆောင်းပစ္စည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ဆင်း scroll နှင့် button ကို click "Reset".
browser ကိုပြန်လည်စတင်သောနောက်, ပြန်ညှိမှုကိုအတည်ပြုပေမယ့်အားလုံးသင်၏ယခင် setting များကိုထံမှလုံးဝစင်ကြယ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
Method ကို 7: ပြန်လည် browser ကို
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အစီအစဉ်များအားလုံးသာ Yandex Browser ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်သည်ဆိုလျှင်, အဲဒါကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စနစ်တကျအလုပ်မလုပ်ကြောင်းယူဆနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု - ၎င်း၏မှပြန်လည်စတင်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင့်ကွန်ပျူတာကနေ Yandex Browser ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Read more: သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ Yandex Browser ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Web browser ကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ပါလိမ့်မည်မဖယ်ရှားသည့်အခါ, သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါသင့်တယ်, ပြီးတော့သင်ကလတ်ဆတ်တဲ့ဖြန့်ဖြူးဒေါင်းလုပ်စတင်ရန်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
Read more: သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Yandex Browser ကို install လုပ်နည်း
Method ကို 8: နာလန်ထူမှုစနစ်
တချို့အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ Yandex Browser ကိုဖွင့်ချိန်မှာမြန်နှုန်းမှာခဲ့ပေမယ့်ပြီးရင်သိသိသာသာကျဆင်းသွားလျှင်, ပြဿနာက၎င်း၏အကြောင်းမရှိအဆုံးအဖြတ်မပါဘဲဖြေရှင်းနိုင်ပါသည် - သင်ရုံ restore စနစ်တစ်ခုလုပ်ဆောင်။
ဒီ function အပေါငျးတို့သအစီအစဉ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရှိရာအမှတ်ဖို့ကွန်ပျူတာပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီ tool ကမှသာအသုံးပြုသူဖိုင်တွေကိုထိခိုက်မည်မဟုတ် - အသံ, ဗီဒီယို, စာရွက်စာတမ်းများ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင် Windows ကိုယခင်ပြည်နယ်မှပြန်လာသောလိမ့်မည်။
operating system ကို restore လုပ်နည်း: ဆက်ဖတ်ရန်
ဤရွေ့ကားပုံမှန် startup မြန်နှုန်း Yandex Browser ကိုပြန်သွားဖို့အားလုံးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Top 15 Advanced Excel 2016 Tips and Tricks (နိုဝင်ဘာလ 2019).